Polycarboxylate Superplasticizer, Umdibaniso eziphathekayo - Gaoqiang
Shandong Gaoqiang New Material Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2012, kunye ikomkhulu ebhalisiweyo million 117 yuan, Kuyinto imveliso admixture yeshishini lweshishini mihla ijonge ukonga umbane kunye nokhuselo lokusingqongileyo, ngokukodwa ukukhonza ishishini eziphathekayo kunye noshishino lokwakha, elidibanisa uphando lwezenzululwazi. , iimveliso kunye neentengiso…
Iselulosi kaEtere HPMC for Ukutyabeka / eziphathekayo / Gr ...
UQHAGAMSHELWANO NATHI UKUFUMANA IINGCEBISO EZINYE ZESAMPULA
Ngokweemfuno zakho, Yenza ngokwakho, kwaye ikunikeze ngeMveliso eziXabisekileyo.
Inkonzo yethu yeSampula
Sinokubonelela ngesampulu yasimahla kuvavanyo lwakho kumthengi wethu wakudala, kuba umthengi omtsha, isampulu yasimahla iyafumaneka.themba ukuba ungahlawula isampulu yeempahla.
Inkonzo yethu yeTekhnoloji
Inkampani yethu yakhe umgca wemveliso wekhonkrithi opheleleyo, uhlalutyo lweekhemikhali kunye nelabhoratri yepropathi. Sineqela elomeleleyo lophando kunye nophuhliso elibandakanya oogqirha abaziingcali, iinkosi.
Inkonzo yethu yokuthengisa
Inkampani yethu inenkqubo epheleleyo, unokufumana inkxaso yobungcali, inkonzo eqinisekisiweyo evela kwinkampani yethu
Ngokufudumeleyo bhiyozela impumelelo yokwakhiwa kwewebhusayithi ...
Dibanisa ukomelela kwangaphakathi kwaye usete isikhephe- ...